प्रचण्ड–बादलसँगै डुब्यो सरकारी १५ लाख
यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्ड–टोलीको म्याग्दी भ्रमण चर्चामा छ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र गृहमन्त्री बादल तातोपानी कुण्डमा डुबेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको उपचा...
मन्त्रिपरिषद् निर्णय विवाद : के षड्यन्त्र रच्दै छ सरकार ?
लामो समयको अन्तरालपछि आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । दसैँ, तिहारजस्ता पर्व र प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अस्वस्थका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको थिएन । लामो समयपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुन्न ...
के बुबाआमाको धर्नाले देला निर्मलालाई न्याय?
निर्मला पन्तको हत्यारा सार्वजनिक गर भन्दै कञ्चनपुरमा धर्ना कार्यक्रम सुरु भएको छ । कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि निर्मला पन्तका बुबा अनिश्चतकालीन धर्नामा धर्ना बसेका छन् । निर्मलाका बुबा यज्ञराज पन्तसँगै अन्य अधि...
कात्तिक २५, २०७५
‘आफ्नै देशमा कसैले पराया भन्दा चित्त त दुख्छ नि !’
कैलाली– बिहान ५ बजे नै सुरु हुन्छ, रवीन्द्र साह रौनियारको दैनिकी । बिहान सबेरै कोठाबाट निस्केका साह काँधमा दन (गलैँचा)को भारी बोकेर दिनभर केलालीको अत्तरिया बजारमा ग्राहक खोज्न दौडिन्छन् । करिब ५ वर्...
सागर चन्दको बारेमा
नेकपा विवादः देशलाई कति फाइदा कति घाटा ?
‘राजेश हमालको महानायक उपाधि बाध्यकारी होइन, भावनात्मक हो’